मस्त निद्रामा परेको गाउँ बिहान हुन नपाउँदै रित्तिएपछि शोकमा डुब्यो! – PathivaraOnline
Home > समाचार > मस्त निद्रामा परेको गाउँ बिहान हुन नपाउँदै रित्तिएपछि शोकमा डुब्यो!
मस्त निद्रामा परेको गाउँ बिहान हुन नपाउँदै रित्तिएपछि शोकमा डुब्यो!
गलकोट – बाग्लुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका–९ मा यही भदौ १७ गते आएको बाढीले ठूलोमात्रामा जनधनको क्ष’ति पुर्याएको छ । रातको समयमा बाढी आउँदा सुतेका स्थानीयवासीसँगै ढोरपाटनका आधा दर्जन गाउँ बगरमा परिणत भए । बाढीमा हालसम्म १७ जनाको निधन भइसकेको छ भने अझै २१ बे’पत्ता छन् । हालसम्म फेला परेका श’वमध्ये १५ जनाको मात्र सनाखत भइसकेको छ । स्मरण रहाेस ढोरपाट पर्यटकिय गन्तव्य हाे ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १८ गते बिहानैदेखि खोज तथा उद्धारको काम हालसम्म भइरहेको छ तर बाढीको वितण्डा यतिसम्म देखियो कि मृतावस्थामा भेटिएका श’व ‘क्ष’तवि’क्षत अवस्थामा भेटिए । फलस्वरुप परिवारले आफ्नै गुमाएका सन्तानको श’वसमेत ज’लाउ’न पाएनन् । अर्कैले ज’लाइ’दिए ।
जीवनभर आफ्नो सन्तानको माया नहुने बाबुआमा सायदै होलान् । आफूलाई बुढेसकालमा हेरविचार गरुन् भन्ने सोच्छन् र त्यो जिम्मेवारी पनि हुन्छ तर विधिको वि’डम्बना आफ्ना नौजवान छोरासहित परिवारका चार सदस्यसम्म बाढीको वि’पत्मा सदाका लागि गु’माएका छन् । यो त दुःखान्त पी’डाको खबर थियो नै ।
यसमा अझ पी’डा त बाढीमा बे’पत्ता भएर ज्या’न गु’माएका आफ्नो दिवङ्गत छोराको श’व अर्कैले ज’लाउँदा भएको छ । यो थाहा पाएपछि परिवारलाई कति पी’डा भएको होला ? बे’पत्ता भएको आफ्नो छोरालाई अर्कैले ज’लाउँदा बाबुआमाको मन कति दुखेको होला ? हामी त केवल अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ ।
ढोरपाटनको बाढीमा बे’पत्ता भएका आफ्नो २२ वर्षीय छोरा नारायण विकको श’व घट्टबोटका बे’पत्ता ३१ वर्षीय प्रेम पुनको श’व भन्दै प्रहरीले आफन्तको जिम्मा लगायो । आफन्तले पनि नारायणको श’व प्रेमको ठानेर १९ गते फेला परेर सोही दिन बुर्तिवाङघाटमा ज’लाइयो । प्रेमका आफन्तले अर्कैको श’व ज’लाएर आएको भोलिपल्ट बिहान पुनः उनको सग्लो श’व फेला पारेपछि २० गते फेरि पुनको श’व बुर्तिवाङघाटमै ज’लाइयो तर नारायणका परिवारले आफ्नो छोराको शव भेटिँदासमेत दा’हसंस्कार गर्न पाएनन् ।
भदौ १९ गते ज’लाइसकेको शव आफ्नो छोरा भएको २० गते प्रेमकोे परिवारले दोस्रो दा’हसंस्कार गरेपछि मात्रै आफूले थाहा पाएको नारायणका बुवा तुलबहादुर विकले बताउनुभयो । “प्रहरीले मलाई थाहै नदिई मेरो छोराको शव अर्कैको भनेर बुझाइसकेर दा’हसंस्कार भइसकेको रहेछ”, तुलबहादुरले भन्नुभयो, “मेरो छोरालाई प्रेम पुनको श’व भनेर ज’लाएको भोलिपल्ट उनको शव फेला पारेको रहेछ, मैले २० गते मात्रै १९ गते प्रेम पुन भनेर ज’लाएको शव मेरो छोरा नारायणको भएको पत्ता लगाएँ, असाध्यै दुःख लाग्यो ।”
आफ्नो छोरा नारयण र प्रेमको शरीर र उमेर मिल्दोजुल्दो भएका कारण प्रहरीले झुक्किएर प्रेमको आफन्तलाई जिम्मा लगाएको उहाँको भनाइ छ । भदौ १९ गते फेला परेको शव एकपटक हेर्न पाएको भए चिन्ने अवस्था रहे पनि आफूलाई खबर नै नगरेको उहाँले बताउनुभयो । “कसैले दुईपटकसम्म दाहसंस्कार गर्न पर्यो, आफ्नो छोरालाई अर्कैले ज’लाएछन्, मैले दा’हसंस्कारै गर्न पाइनँ ।” नारायणलाई १९ गते नै जलाएको २० गते थाहा पाएपछि कपाल मु’ण्डन गरेको उहाँको भनाइ छ । तुलबहादुरका छोरा नारायणसहित बुहारी, नातिनी र छोरीलाई समेत बाढीले बगाएर बे’पत्ता बनाएको छ । तीन जनाको अवस्था अझै अ’ज्ञात रहँदा भेटिएको शवसमेत देख्न नपाई ज’लाइ’एकामा उहाँको दुखेसो छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुर्तिवाङका प्रहरी इन्चार्ज प्रकाशसिंह भण्डारीका अनुसार फेला परेको शव क्ष’तविक्ष’त भएकाले पहिचनामा समस्या भएको बताउनुभयो । “१९ गते फेला परेको शव ३१ वर्षीय प्रेम पुनको भएको पुनका आफन्तले भनेपछि हामीले दा’हसंस्कार गर्नका लागि बुझायौँ”, भण्डारीले भन्नुभयो, “त्यसको भोलिपल्ट प्रेम पुनको स’ग्लो शव फेला परेपछि बल्ल सनाखतमा समस्या भएको थाहा पाइयो ।” प्रहरीका अनुसार सोमबार मात्रै नारयणका बुबा तुलबहादुरले ल्याएको तस्वीरका आधारमा १९ गते प्रेम पुन भनेर ज’लाइ’एको शव नारायणको भएको सनाखत गरिएको छ । फेला पर्ने अधिकांश श’वको ढु’ङ्गा’ले थि’चेको जस्तो हा’तखु’ट्टा चुँ’डिए’का र अनुहार न’चिनिने भएका कारण समस्या भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
उज्यालो हुन नपाउँदै शोकमा डुब्यो ढोरपाटन : धेरैको परिवार खोसियो, काख रित्तियो
बुधबार राती भूजि खोलामा आएको अकल्पनीय बाढीले ढोरपाटनको आधा दर्जन गाउँ नै सखाप बनायो । धेरै वस्तीहरु बगरमा परिणत भए । धेरैको परिवार खोसियो, काख रित्तियो र धेरैलाई घरबार विहीन बनायो । रातको समयमा आएको बाढीमा परेर कोहीले निद्रामै देह त्याग गर्नुपर्यो ।
ढोरपाटन नगरपालिका–७, ८ र ९ का गाउँलाई उजाड बनाएको भूजीखोलाले सबैभन्दा बढी क्षति वडा नं ९ मा पु¥याएको छ । मुख्यगरी फल्लेघर, सुपराङ, भुसुन्डे, सिदु, घट्टेबोट, सेरावाङ, दुनापढेरा, सुकुरर्दुङ, सप्राङ र लाखुरीबोटमा बढी क्षति भएको जनाइएको छ ।
ढोरपाटन –९ देउरालीडाँडाबाट खसेको पहिरो भूजि खोलामा झर्दा बाढीमा परिणत भई बस्तीमा पसेको थियो । शवको सनाखत हुँन नसक्दा वेपत्ता मध्येका हुन् अथवा होईनन् भन्ने प्रहरीले एकीन गर्न सकेको छैन ।
बिहीबार बिहानैदेखि सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय उद्धारमा जुटिरहेका छन् । भूजी खोला आसपासका बस्ती अधिकांश बगरमा परिणत भएको स्थानीय रुपाल घर्ती मगरले जानकारी दिनुभयो । “कल्पना भन्दा बाहिरको बाढी आयो, रातको समयमा पहिरोले खोला थुनिएपछि तलाउँ बनेर फुटेको हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ” उहाँले भन्नुभयो “मेरो घर भन्दा माथीका अधिकांश बस्तीनै उजाडिएको छ ।”
पहिरोका कारण ढोरपाटन –९ सुप्राङका सुस्मिाता बिक र मशेह बि.क.ले आफ्नो ८ जनाको परिवार गुमाउनुपरेको छ । उनीहरु अझै वेपत्ता रहेका छन् । यस्तै शेरु बि.क, हुमे बि.क, कृष्ण बि.कको परिवारका सदस्यहरु खोसिएका छन् । प्रहरीको तथ्याङ्क एकीन नहुँदा झनै समस्या भएको हो । भेटिएका शव आफ्नै परिवारको भन्ने अवस्था नरहेको कृष्ण परियारले बताउनुभयो । “कोहीको टाउँको छैन, कोहीको हात खुट्टा छैन” उहाँले भन्नुभयो “बाढीले बस्ती संगै सबैलाई रित्तो बनायो, आफ्नै परिवार पहिचान गर्न नसक्नेगरी शव फेला परेको छ ।”
मस्त निद्रामा परेको गाउँ बिहान हुन नपाउँदै रित्तिएपछि सिंगो बागलुङ नै शोकमा डुबेको छ ।
आफैलाई पढाउने पापी सरले मलाई यस्तो बनाएपछि…
साथीले कोठामा बोलाएर गएकि केटाहरू बोलाएर यस्तो गराएपछि…
प्रहरीले नै न्यूरोडको एक क्यामेरा पसलमाबाट १० लाख रुपैया लुटेर हिडेपछि ! सिसिफुटेजमा जे देखियो